Ukwehla kwe-baseband 06.15.00 ukuya kwi-05.13.04 | IPhone iindaba
UGonzalo R. | | Jailbreak, Izifundo kunye neencwadana
Ekugqibeleni i Yehlisa i-baseband ye-iPad 6.15.00 kwi-iPhone 3G nakwi-3GS. Ngoku ungalungisa iingxaki nge-GPS kwaye uhlaziye nakweyiphi na i-firmware esemthethweni.
Yehla iye kwi-baseband ye-05.13.04 enokuthanani ne-Ultrasn0w
Ungafaka i-baseband 6.15.00 kwaye wehlisele kwi-05.13.04
Ayisebenzi kwi-iPhone 3GS enenombolo ye-serial mva kune-XX134XXXXXXXX (ukuba uyayenza, i-iPhone yakho iyakuyeka ukusebenza)
IOS enesixhobo sakho ngoku. Khuphela apha.
Pulsa Windows RT
Pulsa Khetha IPSW
Khetha i-firmware yesixhobo sakho, le uyikhuphelileyo, ikwangulo unayo ngoku.
Chaza ukuba i-iPhone 3GS yakho inayo ifayile entsha okanye endala
Buyela kwimenyu ephambili kwaye cinezela Jailbreak
Khetha Yehla kwi-iPad baseband kwaye ungakhethi zonke ezinye ukuba sele uneCydia efakiweyo.
Qhagamshela i-iPhone yakho kunye Yicime
Beka i-iPhone yakho kwi-DFU:
Cinezela Amandla iqhosha imizuzwana eli-3
Ngaphandle kokukhulula Amandla, cinezela iKhaya kwaye ubambe zombini imizuzwana eli-10
Ukukhupha amandla kwaye ubambe iKhaya kwimizuzwana eyi-10-15.
I-iPhone yakho iya kuqala kwaye iqale inkqubo, kwinqanaba I-Flashing Baseband ingathatha ukuya kwimizuzu eli-10, Sukuyirhoxisa okanye uyinqamle ngaphandle kwaso nasiphi na isizathu.
Nje ukuba ndigqibe iya kuqala kwakhona nge-baseband entsha, fikelela kwi-Cydia kwaye ufake i-Ultrasn0w
Ukuba ekupheleni kwebaseband yakho iseyi-6.15.00, yenza yonke inkqubo kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ukwehla kwe-baseband 06.15.00 ukuya kwi-05.13.04
Izimvo ezi-143, shiya ezakho
Ii-3gs zam ezinenombolo ye-serial 880163UPXXX, izakusebenza? Andifuni ukuba nomshicileli omhle omhlophe we-32gb
I-baseband phantsi ngaphandle kwengxaki, ngoku ukuba i-PM ephathekayo isebenza, enkosi kakhulu kubo bonke abaye basebenza nzima ukufumana i-baseband 😀
I-3gs ene-6.15, inombolo yam ye-serial 87922LSYXXX, ndicinga ukuba andinangxaki, akunjalo
UYesu ... inqaku likwenza kucace gca. Ngaba ngumbuzo okhohlisayo? Ngaba ufuna ukuva ukuba iyasebenza ngenombolo yesiriyeli? Ingcaciso encinci: 922> 134 ??????
Iker, izimvo zakho azilunganga kwaphela kwaye azilunganga, kwaye yonke ingxaki ivela kwinqaku, elingachazisi ukuba kufuneka libe likhulu kune-134 kodwa ukuba liqala ngo-1, oko kukuthi, ngo-2011, abo bane-XX8 okanye ifomathi ye-XX9 o-XX0 isusela ngo-2008 2009 nango-2010 ngokwahlukeneyo kwaye ke EWE bangayenza ngaphandle kwengxaki.
UYesu ... inqaku likwenza kucace gca. Ngaba ngumbuzo okhohlisayo? Ngaba uyafuna ukuva ukuba iyasebenza ngenombolo yesiriyeli, ixabisa nantoni na eyindleko? Isuntswana logic: 922> 134?
Enkosi ngenkxaso, sele ndinazo ii-3gs zam ezine-5.13.04 kunye nomqondiso we-GPS
Ndiyenzile kwaye i-ultrasnow ayisebenzi kum, ndibeka i-bb 06.15 kwakhona kwaye akukho nto, ndiyigcina ipod, kodwa andiqondi ukuba kutheni ... inokuba iyimodeli ye-mb ..
yenzekile kum ingekho phantsi kwe-baseband… .. i-asik ibuyela ekubuyiseleni kwi-itunes yoqobo, kwaye uyenze isebenze emva kokubuyela kwakhona kunye nentolongo yayo…. kwaye ufumana iselfowuni kunye nomqondiso we-ultrasn0w ... kodwa ubuye nge-baseband 6.15 🙁
Oku kusetyenziswa ukunciphisa i-iphone 4 nge-baseband 04.12.01 version 5.1.1 kwaye ke ukwazi ukufaka i-ultrasn0w?
kwaye iyahamba kwakhona, ndine-3G, yeyiphi i-firmware endijonge kuyo?
iyahamba kwakhona, ndine-3G, yeyiphi i-firmware endijonge kuyo?
Ndine-3gs 32gb emhlophe enenombolo ye-serial 88004Q4Rxxx, ingaba ingenziwa?
Phendula ku nelu
UJorge Gomez Diaz sitsho
Ukucaciswa kakuhle ukuba umntu wenza inkqubo ngaphandle kokujonga inombolo yeselfowuni kwaye ifowuni yakho ayisebenzi, akukho ngxaki kuya kufuneka ulandele la manyathelo.
INKQUBO EFANAYO KUFUNEKA YENZISWE KODWA KUNYE NOKUKHETHA UKUGQIBELA KWI-IPAD BASEBAND, FAKA I-IPAD BASEBAND IKHETHWE. IBASEBAND IZOKULANDELA 6.15.00 KODWA IFONI IZAKUSEBENZA
Phendula ku jorge gomez diaz
Ndivele ndathobela i-iPhone 3G firmware 4.2.1 yam emva kwexesha elide. Sele ndinayo i-4S kwaye andazi nokuba ndiza kuyisebenzisela ntoni le nto. Kodwa ubuncinci sele busebenza!
Ndinike, apha andikwazi kufumana i-iPhone okanye i-1GS. indlela yokubonisa ukuhleka
Molo ngokuhlwa, ndine-3GB 8G kwaye sele ndizamile amaxesha angama-20 ezigidi phantse kwaye akukho ndlela. 6.15.00 iqhubeka ibonakala kum, ihlala ikhangela ... kwaye kungekudala Akukho nkonzo.
Qaphela: xa ndifaka i-baseband ye-ipad i-wifi yaqala ukusilela.
Kulungile, jonga kum kwenzeka into efanayo kuwe, zombini i-Wi-Fi kunye nenethiwekhi yeselfowuni zazibulala kum. Ukulungisa inethiwekhi ephathekayo, nokuba ndizama kangakanani ukuthoba isiseko sebhendi, khange isebenze, ndiye ndabuya ndaya kulayisha ibhendi yesiseko se-ipad kwaye kunjalo. Kwimodem efanelekileyo ye-wifi, eyahlukileyo, ndenze ukubuyiselwa kwe-IOS kwakhona, kuya kufuneka usebenzise umoya ovuthuzayo wekhephu kwaye yile nto ndishiyeke nayo. Ndiyathemba ukuba iyanceda
Molweni, ndinee-3gs ezingasebenziyo kwi-wifi, iphuma ingwevu ithi "akukho Wifi", kwaye umnatha wenkampani yemfonomfono uyehla, usebenza amaxesha ngamaxesha emva koko umqondiso uyaphuma. Fumanisa ukuba kubonakala ngathi umnini wangaphambili uphakamise i-bb ukuya ku-06.15, ndiye ndacinga ukuba yingxaki leyo, kodwa emva kwemizamo emininzi, ndikwazile ukuyithoba ibe ngu-05.13 kwaye ndibuyise nge-itunes, kodwa ndifake ios 5.1.1 kwaye ndiyilayishe i-baseband ukuya kwi-05.16, ingxaki ye-wifi isekhona, andazi ukuba ndingenza ntoni, ndifuna ukuzama zonke iindlela ezibonisa ukuba ayisiyongxaki yezixhobo, kuba ndifunde ukuba abanye abantu benze into efanayo, batshintshile imodem engenazingcingo bamlandela benengxaki efanayo
Into enomdla endiyenzileyo ndenze inkqubo kwaye ndihlaziya i-baseband yam yonke igqibelele! Kodwa ndiqaphele ubushushu kwikhompyuter yam ndayibuyisela kwakhona i-iPhone ngo-5.1.1 kwakhona ndaza ndaya kwi-baseband 05.16.05! Ewe ifowuni yam isuka kuyo kwaye ayivulwanga yiApple yonke into isebenza ngokugqibeleleyo kodwa xa kusenziwa i-jailbreak ndiyabona ukuba iyatshisa kuyo andazi ukuba kungenxa ye-baseband endiyifumeneyo xa ndibuyisela ukuba nabani na unentetho ndingayixabisa
Kulungile. Wenze ukubuyisela okucocekileyo kwi-iTunes nge-IOS ngaphandle kokulungiswa, akunjalo?
Ngaphambili bendinayo loo bb 05.16.05 kwaye ayivelisi ubushushu be-iphone, ubuncinci hayi eyam. Njengombuzo, xa wenze i-jailbreak, ngaba uyenzile nge-iPhone ecocekileyo ngokupheleleyo okanye ibineeapps, iifoto, abafowunelwa, amanqaku, njl. Elinye ixesha eladlulayo ndenza i-JB nge-iphone ngayo yonke loo nto kwaye kushushu. Ukubulisa
Ndiyakuxelela, sele ndithotyiwe kwaye emva koko ndayibuyisela kuhlobo lwaseburhulumenteni i-iOS 5.1.1 kwaye isebenza ngokumangalisayo, ndonwabile kakhulu kuba iGPS isebenza njengekhubalo kum nokuba ndibone ukuphuculwa kwebluetooth kwaye kuphucule uzinzo yomqondiso we-GSM, ndicacisa ukuba ifowuni yam emva kokuyikhupha nge-BB 6.15.00 yakhululwa ngokusemthethweni.
Ke kuyangqinwa ukuba, kundisebenzele kakuhle.
Ndine-3GS ye-iPhone ene-IOS 5.1.1 Ndenza le nto undixelela yona umqeqeshi kwaye xa iqala kwakhona iyaqhubeka nokujonga ... D:
Kuqala zama ukuthotywa kwakhona kwaye ukuba ayikahambi, faka kwakhona i-baseband ye-iPad, ukuze ubuyise umgca. Ukubulisa
akukho ndlela, ndenza yonke into ukuya kwinqanaba lokuyibeka kwimodi ye-DFU, kwaye xa ndiyibeka kwaye iyayibhaqa ndifumana le ngxaki ilandelayo:
isixhobo esidityanisiweyo asixhasi iinketho ezingafakwanga
Ngaba umntu unokundinceda ??????????
Into ekufuneka uyenzile i-Nachito ngaphandle kokushiya, buyela kwiscreen apho i-jaibreak ivela khona kwaye ukongeza emva koko uyinike i-jailbreak kwaye awufanele uphinde ufumane loo myalezo.
Ndine 3G ene-baseband 05.15.04. IGPS ayisebenzi kum kodwa i-wifi iyandisebenzela. Ngaba uyazi ukuba ingaba yintoni? Ndingayithoba i-baseband iye kwi-05.13.04?
Ndinengxaki efanayo nawe, kwaye izolo nje ndithenge isicelo se-cydia btstack ukuze ndikwazi ukusebenzisa imodyuli ye-gps ebendinayo ekhaya.
Andazi nokuba ndinyuke ndiye ku-6.15 emva koko ndiye ezantsi okanye ndihlale ndinje.
Gnzl kufuneka ndikubuze umbuzo ongenanto yakwenza nolu papasho, kodwa bendingazi ukuba ndiza kuwushiya phi umbuzo wam. Into endifuna ukukubuza yona kukuba ungasisebenzisa na isixhobo (njengekhephu, i-iFaith, iredsnow) ukwenza i-firmware yesiko kunye nokugcina i-jailbreak ubomi. Ndikubuza le nto kuba ndicinga ukuba iFaith ayikahlaziywa ukuze ixhase i-iOS 5.1.1. Ndilindele impendulo yakho, kwaye ukuba kukho esinye isixhobo, ndiyathemba ukuba unokwenza isifundo. Ukubulisa kumlandeli omkhulu weli phepha.
Molo, andingoGonzalo, kodwa ndiza kukuphendula. Nge-tinyumbrela esele igcine i-shsh, kunye ne-sn0wbreeze 2.9.6 unokhetho oluhlanganisiweyo lwe-ifaith kwaye ukuba u-5.1.1 uyasebenza,
Ndiyabulisa Zihlobo. hey Gnzl ndifuna uncedo, sele ndizamile le nkqubo amatyeli aliqela kwi-iphone 3gs ios 5.1.1 bb 06.15 num serie xx130 kwaye endaweni yoko kwaye emva kweminye imizamo ndikwazile ukuyifumana ngaphandle kwe-bb kunye ne-wifi kunye ne-bluethoot engwevu kwaye i-itunes indicela ukuba ndenze indawo endiyenzileyo kodwa ekugqibeleni indinika impazamo kwaye ayigqibi ukufaka i-firmware yoqobo emva koko ndifake i-custome eyenziwe nge-sn0wbreeze kunye ne-bb ipad isebenze kwaye andiyifumani i-wifi okanye i-bluethoot kwaye ke kunjalo Ungasamkeli isixhobo kwaye ubuze ukusibuyisela kwakhona. Nceda nceda kwaye ndiyabulela kwangaphambili.
Phendula kwi coketyto
Makhe ndikuxelele ukuba i-iPhone yakho iyekile ukusebenza, ayisenakulungiswa, kuba i-chip edityanisiweyo kwipleyiti enonxibelelwano lwe-iPhone itshisiwe, yiyo loo nto ingakubonisi i-Wifi, i-bluethoot, okanye i-GPS, kwaye ngekhe ikubonise i-imei, kunye ne-baseband, izinto ezininzi ziye zanyamalala kwaye azinakulungiswa, lihlazo kodwa ngelishwa yenzekile kuninzi kwaye ayibangelwa yile nkqubo, lilishwa nje ingxaki ye-iPhone ezininzi Ii-3G kunye nee-3G kwisininzi sayo, entsha andikaze ndiyibone into enje.
Molo, kwenzeka into efanayo kum, kodwa eyona nto isilelayo yi-wifi, ibonisa imei, isebenza ngeBluetooth, isebenza ngegps, kunye nenethiwekhi yeselfowuni tmb kodwa amaxesha ngamaxesha umqondiso uyanyamalala, i-tmb yam yatshisa yathi chip? ???
Ayisebenzi kum. Kudala ndizama iintsuku ezi-2 nge-mac kunye ne-win7.
Ndandinokuqhekeka ejele 5.1.1. Ndilandele inyathelo lokufundisa ngenyathelo kwaye akukho nto.
Ndifakele u-5.1.1 kwi-iTunes kodwa okoko ndathenga i-iPhone yam kwi-intanethi, andiyazi eyona nto ndiyiphetheyo kwaye nge-sim yam ayizukundivumela ndiyisebenzise.
Ngaphandle kokuyisebenzisa, ndibuyele ndenza yonke into ethethwa sisifundo kwaye ndihlala ndiphelelwa yinkonzo kunye ne-BB 6.15.00
Ukuyibuyisela emsebenzini kuye kwafuneka ndifake i-cfw nge-sn0wbreeze.
Uhlobo lwe sixhobo: i-iPhone
Umzekelo: IPHONE 3GS 16GB WHITE
Inguqulelo ye-IOS: 5.1.1
Ilizwe leMvelaphi: IT
Umhla wokuThenga: (Umhla wokuThenga uQinisekisiwe t1)
Iwaranti: Ngaphandle kwewaranti
Umhla wokuqalisa: 2012-06-20
Itshixiwe okanye ivulwe: ivuliwe
Umnxibelelanisi wefowuni: TMN PRT
Ndiyenzile phantsi kwe-baseband, bendinayo ngo-5.0.1 kwaye ndizamile ukuvuselela ngefemu esemthethweni ukuba ibe ngu-5.1.1 kodwa yanika impazamo, ndayibuyisela kwi-iOS 4.1 kwaye i-baseband ngu-5.14.02… ndingayilayisha 5.1.1 ?? Intoni?? imibuliso ... xa uqhele iCloud ihamba gwenxa ngenguqulo 4. Enkosi kwangaphambili!
eGi, ukuba ufuna ukugcina i-BB 05.14.02 kwaye une-ios 5.1.1 unokwenza i-firmware yesiko kunye nekhephu. Emva koko yenza ukubuyisela nge-iTunes usebenzisa elo siko. Ukubulisa
Isifundo sasiluncedo kakhulu .. Kudala ndiyilindile .. ^ _ ^!
ngokugqwesileyo isebenze ngokugqibeleleyo
ngesizathu esithile ayisebenzi kum, ihlala indinika iziphumo ezifanayo ndigqibezela yonke inkqubo, kwaye i-baseband 6.15 ihlala ivela, kwaye ndizamile i-3G kwii-ios ezahlukeneyo kuba ndibatshintshile ukuba bavavanye kwaye akukho nto, kwaye Ndikhe ndazama i-3GS kwii-ios ezahlukeneyo kwaye khange isebenze kum, kwaye i-baseband ye-ipad 6.15 ihlala ivela ekugqibeleni, enokuba, ngethemba ukuba esi sixhobo sihlaziyiwe kwaye yingxaki ye-redsn0w, imibuliso
Sele ndiyenzile kwaye isebenza kakuhle kum. Ndidangele nangakumbi kunakuqala.
Ekuphela kwento engasebenziyo sisaziso sePush. Faka i-pushfix nge-baseband 6.15, ngaba kufuneka ndiyikhuphe?
UNCEDO .. Andiqondi ukuba malunga nemihla kunye neeveki
I-iphone yam iyi-3GS SERIAL 88035XXXXXX…. Ngaba oku kunokwenzeka okanye akunjalo
Ukuba unako, iselfowuni yakho yenziwa ngeveki yama-35 ka-2010, engenakubakho ukusukela kwiveki yama-34 ka-2011, XX134XX ukubheka phambili.
buuu ke kutheni le nto ukwehla kungasebenzi 🙁 .. ngalo lonke ixesha ndiyenza, ndisenayo i-baseband ngo-6.15… .. kwaye ndilahlekelwe ngumqondiso, kwaye kufuneka ndiyishiye i-firmware yoqobo kunye ne-iTunes ndibuye ndiphinde ndivalele uyifumane… .. kodwa ihlala ihleli ne-baseband 6.15 ……. Ngaba kukho umntu owakhe wehla kuye?
ewe indala kwi-vv yam
Uninzi lwabasebenzisi be-iphone be-3GS abahlangabezana nemfuno yenombolo ye-serial abaphumelelanga, kubonakala kwibhlog efanayo yeqela le-iphone dev. Andazi ukuba ezinye izinto zinokungenelela ngaphandle kwezo sele zisaziwa, ezinje ngokubuyiselwa okucocekileyo.
NDIPHELELEYO !!! Enkosi!!
Inyathelo 1: Ewe ndiyakuxelela, bendine-3GS yam ene-OS 5.0.1 kunye ne-BB 6.15, kuqala ndafaka i-OS 5.1.1 nge-iTunes
Inyathelo 2: emva koko ngeREDS0W ndafaka i-CYDIA kunye ne-BB ye-iPAD !! (Zombini ngaxeshanye)
Inyathelo 3: nje ukuba ukhethe i-BB 6.15, faka i-ULTRASN0W kwi-CYDIA ukuze ithathe iselfowuni ...
Inyathelo 4: ngaphandle kokwenza enye into okanye ukufumana kwakhona i-Backup, ndiyibeka kwi-DFU ndaza ndaqhagamshela kwi-REDSN0W ngokhetho lwe "Downgrade ukusuka kwi-iPad baseband" emva kokuba iphinde yaphazamisa, i-OS 5.1.1 kunye ne-BB 5.13.04 zazifezekile ( kwaye i-GPS iyasebenza !!!!!) Ndiyathemba ukuba iluncedo kuni… Imibuliso evela eArgentina
Ndikhuphele i-IOS, kodwa ndifumana iifayile zeDMG, apho ndingayikhuphela khona .ipsw ifayile yeewindows, ndine-iphone 3GS ene-ios 5.1.1. Ndiyathemba ukuba ungandinceda.
UJuan Ayala sitsho
Ngaba ndiza kuba nakho ukufaka i-baseband ye-iphone 3gs enenombolo ye-serial: 83952UK23NP? Okokuqala, Enkosi
Phendula uJuan Ayala
molo, ndine-3gs ye-iphone enenombolo ye-serial 85011WN83NP ndingayinciphisa ibhendi yesiseko 06.15.00? Enkosi
I-HOPE NEWS zabasebenzisi be-Iphone 3GS abangakhange bakwazi ukuthoba umgangatho.
Ngokwewebhusayithi esemthethweni yeQela leDev, kubonakala ngathi bafumanise ukuba kutheni abanye bethu bengenakubuyela kwi-BB 05.13.04.
NgoLwesine olandelayo umhla wama-28, baya kufumana i-iPhone 3GS yokuvavanya isisombululo. Lixesha lokuba ulinde ithutyana.
Molo, hlaziya kwi-ios 5.1.1 kwaye ufake i-ipad baseband kwi-iphone 3gs serial number: 83952UK23NP yonke into igqibelele kodwa xa kufikwa ekuthobeleni ayigqibi yonke inkqubo kodwa ihlala ikwi-ipad baseband ... eya kuthi ibe yintoni Kwenzeka ntoni?
Zihlobo, ndifumana i-iPad baseband isilele, ngaba ukhona umntu owaziyo isizathu?
Molo mhlobo, molweni ekuseni, inombolo yesiriyeli ngu-88928TMXXXX, ungandixelela iveki nonyaka wokwenziwa kwayo? Kwaye ukuba kunokwenzeka ukwehlisa ikhompyutha kule khompyuter, uyikholelwe okanye ungakholelwa, ndiyifundile yonke iposti, kwaye ngento eyabhalwa nguYesu ndadideka kancinci nenombolo ye-serial. Ndingayivuyela impendulo ecacileyo. Busuku benzolo
Molo, inombolo yakho ye serial ifundeka ngolu hlobo lulandelayo. I-XX928XXXXX, unyaka wama-2009, iveki yama-28. UMuscle Nerd uthintela ukusetyenziswa kokwehliswa komgangatho we-BB kwezo zithuthi ezenziweyo ukusuka kwiveki ye-34 yowama-2011 (XX134XXX). Kwithiyori uyakwazi, nangona uninzi lwabasebenzisi be-iPhone 3GS befumene iingxaki kwaye khange bakwazi ukuthoba umgangatho. Ngale nto i-redsnow iya kuhlaziywa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ngokwam, ndincoma ukuba ulinde olu hlaziyo, nangona isigqibo sesakho wedwa. Ukubulisa kunye nobusuku obuhle
Okokuqala ukuzama, kusekho i-baseban 06.15.00, ndiyifakile i-ultrasn0w kwakhona kwaye ayibambi mqondiso womqhubi… .. siya kwilinge lesibini. Ndiza kukuxelela
Isilingo sesi-2, andazi ukuba ndenza into engalunganga, ndiqala kwakhona nge-baseband ye-06.15.00, inye kuphela into eyahlukileyo kukuba ngeli xesha ukuba ndithatha umqondiso ngaphandle kokufaka ulstrasn0w… Masibone ukuba kwenzeka ntoni kwi-3.
Hei vodkanroll, bendifuna ukuhlaziya i-iphone iye kwi-ios 5.1.1, kuba ndifuna ukuvavanya inkqubo njengoko ichaziwe nguSERGUTI, ezinye izimvo zingasentla. Okwangoku ndine-ios 5.0, i-baseband 06.15.00, i-jailbreak eyonakalisiweyo, yeyiphi intambo oyicebisayo? sele ukhuphele ios 5.1.1 kwikhompyuter.
Ndiyayixabisa impendulo yakho
Kuya kufuneka wenze utyikityo lwesiko, ndisebenzisa i-Snowbreeze kulonto. Oku kuyakugcina i-BB yakho. Xa unayo, yisebenzise ekubuyiseleni nge-iTunes.
Enkosi ngempendulo yakho mhlobo, ndikubuze umbuzo wokugqibela. Ngaba kukho umsonto okanye isifundo esichaza inyathelo ngenyathelo inkqubo oyibonisileyo kum?
UFabian, ndibhala impendulo yam kabini kwaye ayiveli, iya kuba ngenxa yokuba inde kangakanani, hehehehe ndithumele i-imeyile kwaye ndiza kuyibhalela khona. Ukubulisa.
Molo, ndine-3gb iphone 32gs emhlophe, kwaye inombolo yam ye-serial 889353GGXXX kwaye ndizamile ukwehlisa ibb 6.15 kwaye ayisebenzi. Ndiyenzile amaxesha amabini kwaye akhonto ngoku iphone yam ifana ne-ipod: /, umntu angandinceda nceda.!
Faka i-Ipad BB kwakhona, iya kuba nge-06.15 kodwa iya kukusebenzela.
Hei ivodkanroll kodwa andifanelanga ukuba ndithathe isikhundla okanye kufuneka ndilinde imisipha ukuba ihlaziye i-redsnow?
Ngqongqo ukuba unako, kodwa kukho iindlela ezithile ezenza ukuba ukwehla kungalingani, yiyo loo nto ingxelo entsha ye-redsnow isiza. Kwimeko yakho ndingayilindela le nguqulo intsha.
Ndiyathemba ukuba sele ufumene umqondiso kwi-iphone yakho.
Ukuba ndiyifumene, enkosi
Molo, imeyile yam yile fabianchohernando@hotmail.com, awazi ukuba yeyiphi eyakho
UFabian, ndikuthumele amakhonkco, ndiyathemba ukuba sele ukwazi ukwenza le nto ubuyifuna, imibuliso
Molo mfondini, andinaxesha lokwenza le undixelele yona. Ndilinde ukuhlaziya i-iphone yam ibe ngu-5.1.1 namhlanje ndingene kwiphepha le-devteam kwaye ndinikezela ngohlaziyo lwe-redesn0w abapapashe ngoJulayi 4, kwaye kwilinge lokuqala lokwehlisa lasebenza ngokugqibeleleyo, i-gps iyabukeka kwakhona, Ndiye ndaqaphela ukuba ibhetri ihlawula ngakumbi.
Kwimpelaveki ezayo ndiza kuhlaziya i-IOS, kwaye ndisebenzise amakhonkco ondithumele wona.
Unombulelo ongunaphakade ngononophelo lwakho.
I-EX CE LEN TE, ilinde ixesha elingakanani le downg, isebenza ngokugqibeleleyo kwaye ayilungisi i-GPS kuphela kodwa ifowuni iyancipha, enkosi kakhulu
Phila ixesha elide 3GS
Kwabo bafumana umyalezo:
"Isixhobo esixhunyiwe asizixhasi iinketho ezingafakwanga"
Ubuyela umva, ukhetha i-jailbreak kwakhona kwaye kuya kufuneka wenze inkqubo ngaphandle kwengxaki.
Ityala kukuba ndiyathoba, i-baseband ukusuka kwi-06.15.00 ukuya kwi-05.13.04, kuba amaxesha amaninzi i-baseband efanayo ihlala (06.15.00), kwaye ifowuni ihlala ikhangela okanye ngaphandle komqondiso.
Oku kulungiswa ngokulula ngokufaka kwakhona i-baseband ye-iPad 06.15.00 ene-redsn0w efanayo.
Emva koko banokuzama kwakhona, kodwa kwiimeko ezininzi akukho ndlela yokunciphisa i-baseband, ndisebenze kunye okokuqala kwaye enye ndenze yonke into, zama iiFirms ezahlukeneyo kubandakanya u-5.1.1, yenze nge-iPhone ebuyisiweyo ngaphandle kokwenza kusebenze, kusebenze, kunye ne-baseband ubeke nje, (ukusukela emva kwenkqubo ukuba awuyikhupheli ku-05.13.04 ihlala "ikhangela" kwaye emva kwethutyana "akukho nkonzo"), ngo-Win 7, nge-Win XP, ngaphandle kokukhetha i-IPSW, (kule meko inokwenziwa ukusukela nge-Boot eNtsha), kodwa ndizamile ukumakisha Khetha i-IPSW nokukhetha uguqulelo olunye oluQinisekileyo olwalunalo iphone ku….
Ayisiyonto, kukho abanye abangayiyo yiyo loo nto NDICEBISA UKUBA ABANGENAYO I-Baseband 06.15.00 kwi-iPad abangazamiyo ukuyilayisha, kuba baya kuphulukana neGPS kwaye i-iPhone ayizukusebenza "egudileyo" iya kuba kukuba abasifumani isisombululo, kwaye balinde uhlaziyo olulandelayo, olunokubakho kungekudala, kwaye umntu ongakhange awukhuphele uyangqina ukuba emva kohlaziyo ewe.
Ukuba sele unayo i-06.15.00 baseband, ke ngokuvavanya awuphulukani nantoni na kuba ukuba awuyikhupheli kwaye awunalo uphawu lokuba kumgaqo uyalungiswa ngaphandle kwengxaki, nangona ndibabonile nabantu abaphulukene ne-wifi, BT ngwevu kwaye ukuba kubonakala ngathi akukho sisombululo.
Molo, zindaba ezimnandi. Le ndlela ilungisa ukunxiba okugqithisileyo kwebhetri ye-BB 06.15.00
Zeziphi ezinye i-BBs ezenza lo msebenzi wokuthotywa zisebenze nazo ??????? nge zangoku umzekelo ukuze ube nakho ukukhupha.
Ndinayo kwezi zangoku, ndibeka enye kwi-ipad 6.15 emva koko ndayithoba kwaye ukuba iyandisebenzela, kufuneka ulumke ukuba ungazibeka kwi-ipad okanye hayi
Ndine-3g kwaye ndiyishenxisile njengoko kubonisiwe kwisifundo kuba ihlala kwi-apile kwaye ayiqali ios 4.2.1 bb 05.15
Phendula u nano
ENKOSI bendine3gs ekhaya ndihleka ngoba besele ndinayo le 4, ndenze i-jailbreak nge-redsnow emva koko ndalayisha i-bb kwi-ipad nge-redsnow kwaye ekugqibeleni ndiyikhuphele nge-redsnow kwaye yonke into isebenze kakuhle okokuqala kulula kakhulu Enkosi isifundo ngoku ndiza kuba nefowuni xa ndisiya eholideyini
Kwi-Iphone 3G eneBootLoader 5.9 le nkqubo yokwehlisa iBhendi yeBase ayisebenzi okanye sele ivavanyiwe kwizixhobo ezithile. Ukubulisa
Ndinombuzo ndinayo i-iPhone 3GS 8GB ene-serial xx134, umbuzo ngowokuba yayisele ikhutshiwe kodwa xa ndifuna ukuvuselela ku-5.1.1 ndiyenzile ukusuka kwi-iTunes kodwa xa ndiyenzile, i-baseband yatshintsha yaya ku-06.15 kwaye Andinayo inethiwekhi kodwa i-wifi kunye nebluetooth ukuba iyasebenza, ngaba ingxaki enye isasebenza okanye ingasonjululwa ngandlela thile? Enkosi kwaye Malunga
uJuni 30 sitsho
Uxolo, ndiyithobile i-baseband kodwa i-gps ayisebenzi.Umntu uyayazi ukulungisa le ngxaki.
Phendula uJuan 30
Molweni kulungile, ndine-iPhone 3GS ene-bootrom endala kunye ne-baseband 6.15 efakwe i-cidya kwaye ndiyenza yonke le nkqubo kwaye indenza i-baseband isilele ngalo lonke ixesha, ndibuyela umva ngokufanayo ... ndincede ndiyitye ibhetri le baseband ndincede
molo kuhle, ndine-3gs ye-iphone ene-baseband 06.15 kunye ne-bootrom endala, ndiyenza yonke le nkqubo kwaye ndiyazi kwakhona xa ndifika kwi-dfu ndiyibeka kwaye ngokukhawuleza ndifumana i-baseband isilele ngalo lonke ixesha ... kwaye ndizamile kuzo zombini iikhompyuter W7 kunye xp kwaye akukho nto ifanayo ...
Nceda nceda kuba i-baseband isebenzisa ibhetri entle
Esinye sezizathu zokuba ufumane i-baseband isilele ngenxa yothintelo kwinethiwekhi yakho ye-intanethi. Yizame kwenye indawo. Bendimane ndiphuma xa ndifuna ukuyenza emsebenzini, ndiyizame ekhaya kwaye iyasebenza slds
Enkosi Javier, izakuba njalo, kuba bendiyenza ngaphandle kwe-intanethi kuba ndiselwandle kwaye andinayo ... ayinakuhlaziya kuba akukho nxibelelwano lwe-intanethi okanye into enjalo ...
Injalo ke. Kufuneka uhlale uqhagamshelwe kwi-intanethi. Ukubeka kwi-dfu awudingi ukuba ne-intanethi. Kodwa ukuqhagamshela kwi-iTunes ngokuqinisekileyo kwaye uhlaziye ufuna i-intanethi
Injalo ke. Kufuneka uhlale uqhagamshelwe kwi-intanethi. Ukubeka kwi-dfu awudingi ukuba ne-intanethi. Kodwa ukuqhagamshela kwi-iTunes kunye nokuhlaziya ufuna i-intanethi
Molo ndingathanda ukuba undincede ndenze inkqubo kunye ne-mesalio kakuhle phakathi kwabazali, i-GPS kunye nezaziso azikasebenzi kwaye ndingathanda ukuba undixelele indlela yokulungisa le ngxaki
Ndine-iPhone 3G, nge-IOS 4.1, ndakwazi ukwehlisa ukusuka kwi-6.15 ukuya kwi-05.13.04 ngenkqubo echazwe apha. Ifowuni yam ibinamanzi ngakumbi, izaziso zisebenza kwaye ingxaki iphuculwe, ukuza kuthi ga ngoku andikapheli kwinkonzo njengoko ibisenza njalo.
Enkosi ngenkqubo, ndonelisekile ziziphumo, ngoku ndingasebenzisa i-GPS, i-3g kunye nomqondiso awuxhomeki. Ndiyathemba ukuba iyaqhubeka ngoluhlobo.
Ndiyabonga ngento yonke!!! Ekugqibeleni ndingasebenzisa i-GPS ngokuchaneka ngakumbi, ndenze onke amanyathelo akhankanyiweyo apha kodwa, ekugqibeleni kuye kwafuneka ndiyikhuphe i-Mobile Substrate kwaye ndiyibuyisele ukuze izakundinika umqondiso ophuma kum ophetheyo. Ngoku ndine-5.1.1 ene-BB 05.13.04 kunye ne-GPS yemfezeko !!! ENKOSI BAHLOBO
Ndiyithobile i-3G yam, akukho ngxaki, i-baseband ikwi-05.13.04.
Ke ndiyibuyisile ukusuka kwi-iTunes ukuzama ukuyishiya ngaphandle kwebhokisi (isigxina sidlulile kwaye ndifuna ukuyikhupha ngokusemthethweni).
Nangona kunjalo ndifumanisa ukuba ayifumani nkampani. Ayibonakali kum ngaphandle kwenkonzo, yirallita (ngokungathi ubuncinci bokugubungela).
Eminye isebenza ngokuchanekileyo…. Ndizamile ukubona ukuba nditsibile uhlaziyo lomqhubi (imovistar) kwii-itunes kwaye akukho nto ...
Uxolo ngokungalungisi 🙂
Jonga, ukuba sowuyithathile kwaye akukho operadr ivela, kuya kufuneka ukhuphele kwi-cidya ultrasnow. nje ukuba uyifakile, ingxaki iya kuthi shwaka kwaye uya kuba nakho ukufumana umqondiso kwakhona.
Enkosi Mario! Ewe iyilungisile. Kodwa bendinethemba lokuba ndiza kubuyisa yonke ifowuni ngaphandle kokuxhomekeka kwi-utrasnow / cydia kuyo 🙁
Jonga: Vula i-cydia, kwaye ngelixa ulapho ukhetha ukukhangela, beka igama elithi ultrasnow kwaye isicelo siza kuvela ngegama le-ultrasnow, ukhethe ukuyifaka kwaye xa sele ifakwe ikhadi le-sim inokusetyenziselwa nawuphi na umsebenzisi. Kukude nje ukuba une-baseband enokukhutshwa yi-ultrasnow, kule meko unayo emva kokwehla, okuyi-5.13.04
Ndiyaqonda, kodwa ngelishwa ngelo xesha andinalwazi, nangona kunjalo, kuya kubakho umntu ofana nam okulungeleyo ukukunceda. Ndiyathemba ukuba ungakufezekisa oko ukucebisile. Ukubulisa.
Ndikuxelela amava am.
Zaqengqeleka iinyanga ndizivalele iselfowuni yam ngescreen esimnyama ndingenanto. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo nge-redsnow entsha ndikwazile ukuyivuselela, kodwa okwenzekileyo kuye kwafuneka ndihlaziye i-fir ibe ngu-5.1.1 eyayilungile, NGAPHANDLE KWESIMPAWU SOMNXEBA, ukuphanda ndiyifumene ingxaki. I-baseband yahlaziywa ukuya kwi-06.15 eyenza ukuba i-id id yam ingabinamsebenzi.
Isinyathelo esilandelayo ndathoba ukuya ku-4.1 kodwa i-baseband yaqhubeka ngo-06.15 kwaye ndenza le nyathelo ngenyathelo kwaye andinakukwazi ukwenza ukuthotywa kweBASEBAND 🙁 ihlala ihlala ngo-06.15 ke ndine-ipod okwangoku hahaha
Molo, kwenzeka into efanayo nakum. Ndiyakuxelela. Ndine iphone kwi-5.0.1 eqinile kunye ne-BB 06.15 kwaye ndenze impazamo yokuyihlaziya nge-iTunes. OH BIG IMPAZAMO !!! Iscreen esimnyama njenge-ipad BB ayihambelani ne-IOS 5.
Ndifundile kwibhlog yokuba ndenze iDowngrade ukuya ku-4.2.1 kodwa ndiyenzile kwi-4.3.3 kwaye yindlela eyavuselela ngayo ifowuni yam, emva koko yonke into yayilula. Ndayaphula, ndafaka i-ultrasnow ndaze ndathoba i-BB.
Kodwa ndinenkani kanjani…. Ndilayishe kwakhona i-firmware yeselfowuni kwakhona kwi-5.1.1 nge-firmware yesiqhelo, ndenze i-jailbreak kwaye ekugqibeleni ndaphinda ndayifaka kwakhona i-ultrasnow.
Ngokwazi kwam ityala lakho ngokwahlukileyo kwelam, wehliselwe ku-4.1, ngethemba ungazama nge-pa 4.3.1 okanye 4.3.3. Unethamsanqa!
Hee ami redsnow ayindiniki ithuba lokukhetha abantu abanokwenza ntoni
inombolo yam yezibalo ngu-XX354XXXXXXX Ndicinga ukuba iphezulu kune-XX134XXXXXXX okhankanyiweyo! ukuba ndiyayifaka ifowuni? Ndiyabulela kwangoko!
UDavid ramos sitsho
Uxolo, ngu-XX835XXXXXXX, ndingenza ntoni ukuba ingaphantsi kwe-XX134XXXXXXX, ngokokwazi kwam ukuba u-8 ngu-2008 kwaye u-1 ngu-2011, akunjalo?
Phendula kuDavid Ramos
UJavier, inye into engenanto yakwenza ne-baseband kodwa andifumani mpendulo ... ndiyitshintshile i-digitizer yesithandwa sam, ebesikhe saqhekeka, ndibeka yonke into ngokuchanekileyo kunye nescreen sokuchukumisa kwindawo esezantsi emgceni ayisebenzi ... Ndizamile ukuyilungisa ngokucoca kwaye ngoku ndifumana imivimbo kwikhusi kwaye ndiyathanda ukungcangcazela kancinane ... ndingenza ntoni? Ngaba iLCD, ndingayenza into?
Enkosi kakhulu ngeposi endikhonze kakhulu kwaye ndikwazile ukukhulula iselfowuni yam kwimibuliso egqibeleleyo
Ndinengxaki yokwenza oku, i-iphone yam ibine-Baseband 16.15 kwaye xa ndiyithobileyo ukuya ku-5.13.04 andifumananga mqondiso, ithi akukho nkonzo, kwaye ndine-ultrasnow efakiweyo, kodwa andikwazi ukwenza iminxeba.
Uxolo, bendithetha nge-6.15.00
Ukugqibelela !! enkosi uthixo ngale posi. Ndiyahlaziya iphone yam ,.
Kulungile, nje ukuba konke kwenziwe ngaphandle kweengxaki, ngoku ndinganyuka njani ndiye kwi-IOS ephezulu kune-4.2?
Uxolo, kodwa i-GPS iqhubeka ihamba kakubi hehe
Inombolo yeSeri ye-iphone 3GS yam iphezulu kune
Ngaba i-XX948XXXXXXX iyakukhonza .. ???
ngokokuqonda kwam I-XX134XXXXXX i-1 ithetha i-2011 kunye ne-34 ngeveki
Kwimeko yakho iyakuba yeye-2009 iveki i-48 yeyam yayi-XX011XXXX oku kuthetha ukuba ndingu-2010 iveki ye-11
Molo, ndingayenza into yokwehlisa? Inombolo yam ye-serial ngu-86937VXZ3NR, ndinee-3gs, ziya kuba luncedo kakhulu kwaye ndinegumbi elidala. Iya kuba luncedo kakhulu, enkosi kakhulu
Uphawu olubi lweGPS luya kukhasa. Ndicela umntu ondiphendulayo
ewe mzalwana .. lungisa lonto kwaye ibhetri ihlala ixesha elide ..
Molweni… Enkosi kum isebenze ngokugqibeleleyo kum. Kwilinge lokuqala. IGPS epheleleyo .. Enkosi kakhulu
Molweni ndinee-3gs ze-8gb, njengoko bendixelela ukuba bafaka i-baseband ye-ipad kwaye akukho sisombululo ngaba kuyinyani ukuba akukho sisombululo sokuyibuyisela ebomini?
Ngale sifundo ungayenza ... ndine-3GB 16GS eyayine-ipad baseband .. ngoku ndinayo nge-05.13.04 ..
isifundo esihle .. Ndibe neengxaki kodwa ekugqibeleni zisebenzile, emva kokubuyisela useto kunye nemixholo ye-iphone, ndisusa ikhowudi yokutshixa kunye nepini yokutshixa ... kwaye akunyanzelekanga ukuba ndikhethe nayiphi na i-IPSW ...
Molo ukubona, ngubani onokundinika uncedo oluncinci, ndine-3g ye-iPhone eneqhosha lamandla / lokulala elaphukileyo, xa ndibeka imowudi ye-dfu ngokubuyisela i-firmware eguqulweyo yi-redsnow nangaphezulu> DFU IPSW, xa uyibuyisela phambi Inkqubo igqityiwe impazamo (37) iyavela, kwaye iphone ishiywe ngescreen esimnyama kodwa iredsnow ayiyifundi njenge-dfu kodwa njenge: Idityanisiwe: Iphone 3g (WTF)
Ndincede andifumani sisombululo!
Molo Jair_bb, andazi ukuba uyilungisile na le ngxaki kodwa ndisakunika isisombululo kuba bendikwindawo enye nawe, ndine-iPhone 3G kwaye bendicinga ukuba liqhosha lasekhaya elingasebenziyo kuba khange ingene kwimowudi ye-DFU Nangona kunjalo, ngaphambi kokuzama ukuyibuyisela, khange isebenze nge-100% kodwa iqhosha lasekhaya lisebenza ngokucinezela kancinci. Into endiyenzileyo kukuya kumphathi wesixhobo sePC ndikhangele izibuko apho i-iPhone yayiqhagamshelwe khona, ndothuka xa ndibona ukuba ayindiboni, kuba ivela ngombuzo, emva koko ndayinika Hlaziya umqhubi weNethiwekhi kwaye ukugqiba kwam ukuhlaziya, ndiyibonile i-iPhone kwimo ye-DFU. Phambi kokungena kwiRedsn0w 0.9.15.b1 kwiZongezelelweyoIzinto ezingaphezulu kwaye ukhethe i-Auto-Phuma kwimo yebhokisi yokujonga yeWTF. Ndiyathemba ukuba ndikwazile ukukunceda. Unethamsanqa!
Ukuba kunokwenzeka, ndiphendule kulo myalezo ukuba bendiphosakele xa ndibhala imeyile yam
Kwi-redsn0w xa ibonisa ipsw iyayamkela kuphela kwi-ipsw yesiko, ukuba ndiyinika ngokukhetha ipsw indixelela ukuba ayixhasi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ndikhuphele ipsw yoqobo (ndiyikhuphele kwiindawo ezahlukeneyo kwaye nazo zonke zindixelela into enye)
Ngaba kukhuselekile ukuyenza ngokhetho lwesiko?
ukuba ikhuselekile, hlaziya ingxelo yohlobo lwe-redsnow ukuze iqonde ukuba uyifaka
Ugqibelele, enkosi ngesifundo.
U-Israel Altamirano sitsho
zihlobo ndifumana ukuba i-iPhone yam sele iphukile kwaye ayizukundivumela ndiqhubeke .. ndingenza ntoni?
Phendula ku-Israyeli Altamirano
Hee, ndinayo i-iPhone 3G ene-baseband eyi-6.15 kwaye sele ndiyenzile yonke le nkqubo izihlandlo ezininzi kwaye isafana ne-6.15, ucinga ukuba kwenzeka ntoni? (Uhlobo lwe-ios ngu-4.1)
Molo, ndinoluhlu lwe-iphone 3gs xx118xxxxxx, kunye ne-BB 05.16.05, ndingayifaka i-BB yam enye evela kwi-iPad (06.15) emva koko ndiye ku-05.13 ngaphandle kwengxaki?
ezigqwesileyo ... iphone 3gs zilungile ... ndinengxaki kuphela ukuba andinakungena kwi-cydia ...
ujeffrey torres sitsho
Kuya kufuneka wenze "ukuqala nje" nge-redsnow ngalo lonke ixesha uyicima
Phendula ujeffrey torres
maxz maserati sitsho
I-iphone 3g yam ikwimowudi ye-wtf endiyenzayo kwiredsnow
Phendula kwi-maxz maserati
Ndiyenzile amatyeli aliqela kwaye iyaqhubeka nge-6.15 endiyenzayo
UAlexander Alban sitsho
I-iphone yam 872282PPEDG NDINGAYIFAKA
Phendula u-Alejandro Alban
I-iphone yam i-872282PPEDG INOMBOLO YENKONZO NDINGAYIFAKA IBASEBAND IPAD ..
Luis Enrique Morales umfanekiso obambe indawo sitsho
Molweni iphone yam ingu 3gs serial no 5KO4605g… ukuba ndingayenza nhe ??
Kuthekani ukuba ndayisombulula ingxaki engaziwa yiTelcel chip yam? Into ehlekisayo kukuba iyayamkela inkampani kunye nenombolo yam, kodwa liphi uphawu eliqhubeka nokundicofa ndikhangela, ukusuka apho ukuya kuyo yonke enye into isebenza kakuhle ..
izoyisombulula le ngxaki?
Phendula uLuis Enrique Morales
UPedro Valenzuela sitsho
Ndinengxaki, ndifuna ukukhuphela i-baseband ye-iphone yam kodwa iqhosha lokutshixa okanye elitshixayo ikhompyuter kwaye liyicime aliloncedo ngenxa yoko andifumani ndlela yokukhuphela i-baseband kuba uhlala ufuna ukubeka kwi-dfu kulo naliphi na inyathelo ukuba ungandixelela indlela endinokubulela ngayo kakhulu kuba andinakho ukusebenzisa isiko firmware okanye nditsho nokuhlaziya iphone .. kwangaphambili enkosi
Phendula kuPedro Valenzuela
Ukhuphelo lokuqala Isambrela esincinci, kwaye uyinike apho ithi ukufaka khona ukubuyiswa, i-Itunes iyakukuxelela ukuba isixhobo safunyanwa kwimowudi ye-DFU, emva koko uye kwiRedsn0w kwaye uyinike apho ithi khona iZongezo, ngakumbi nangakumbi emva koko iDfu ipsw kwaye uphawule .ipsw ye-iphone yakho kunye nefayile ebizwa ngokuba yi-ENTER_DFU_iPhone iyakwenziwa, uye kwi-iTunes ucofe iqhosha lokushiya kwaye ucofe apho ithi buyisela khona kwaye ukhethe ifayile ENTER_DFU_iPhone kunye ne-voila iya kukunika impazamo 37 ndicinga kwaye iphone yakho izongena kwi dfu
Ekupheleni kwenkqubo sele ingene kwilupp yokuqalisa kwakhona. Into endiyenzayo?
faizal tahir sitsho
Sele ndizamile ukwehla ukusuka ku-6.15 ukuya ku-5.13 kwaye indinika impazamo xa ndifunda igumbi ... Kwaye ayihli, iyaqhubeka ngo-6.15
Molo, ndinayo i-iPhone 3GS kwaye ndiyihlaziyile ukuya ku-5.0.1 kwaye ndiyikhuphe ngesiko elidala le-firmware engasebenziyo ... bendifuna ukwazi ukuba ndiyilayisha njani i-basenbad ku-06.15 ... 5.0.1 oyinika ukukhuphela ngaphezulu kwaye yisebenzise kunye ne-redsn0w .... nceda linda impendulo yakho enkosi kwangaphambili
Ewe ndonwabile, ekugqibeleni, ndikwazile ukufumana i-iPhone 3GS yam ukuba ibe nomqondiso. Nangona indibizile kuba bendizamile izifundo ezininzi ..
kwaye ngaloo nto ndingabeka naziphi na iioos
Ukugqwesa, nokuba iqhosha lamandla alisebenzi ndakwazi ukuyenza kwaye i-chip yam sele indibhaqile, esi sifundo siligalelo elikhulu. Enkosi
U-Luis Cortorreal sitsho
Uyingqondi, yonke into ihambe kakuhle. Enkosi madoda
Phendula uLuis Cortorreal
Kude kube namhla ndizifumene ndinemfuno yokwenza le nkqubo isebenze phantse kuyo yonke into, ekuphela kwento endiyifumeneyo YOKUTHETHA kukuba xa ndifuna ukufaka i-Ultrasn0w ukukhupha ndifumana ukuba kufuneka ndine-iOS 3.0 ... ILOGICA into ngokombono wam kuba ine-iOS 4.2.1 eneMODEM 05.13.04 enokukhutshwa kuba ayinakuba ...
Andazi ukuba yenzekile komnye umntu, ndiyathemba ukuba andizukukhuphela i-iOS kule meko, ndilinde isicelo esivela kuwe kwaye ndiyabulela kwangaphambili.
NCEDA…. Ndizamile ukukhulula i-iphone 3gs yam kodwa khange ndiwubone umhla wokwenziwa kwayo kwaye ngalo mhla XX202XX kwaye ngokuqinisekileyo iseli ayisasebenzi kuba iyaqala kwakhona, ndifuna ukwazi ukuba ikhona enye indlela yokuyisebenzisa njenge ipod ewe ukuba iseli yam isethwe kwakhona, enkosi
UClaudio uthembekile sitsho
Inkcazo yakho yayikukuvuyisana ngokugqibeleleyo ngokuba ngumhlohli olungileyo enkosi isebenze ngokumangalisayo.
Phendula uClaudio Leal
Amatyala okukhusela i-iPhone emanzini nakwisanti ngexesha lasehlotyeni